Note9- Saturngod
iPhone ကို ပုံမှန် သုံးနေပေမယ့် နိုဝင်ဘာလက စပြီးတော့ Note9ကို စသုံးဖြစ်တယ်။ စသုံးကာစကတော့ iOS လောက် သဘောမကျဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သုံးနေကျ အတိုင်း mac နဲ့ sync မဖြစ်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ Android အတွက် support ဖြစ်သည့် App တွေပြောင်းသုံးရတယ်။
အခု ၃ လ လောက်သုံးပြီးတော့ နေသားကျလာပါပြီ။ သဘောကျတာကတော့ ကင်မရာပဲ။ မြင်ကွင်း ပိုကျယ်ပြီး သုံးခဲ့သည့် iPhone ထက်သဘောကျတယ်။ နောက်တချက်က battery power saving mode နဲ့ ဆို တော်တော် ခံတယ်။ 4% လောက်ကျန်တော့တာကို ၈ နာရီလောက် ထပ်ခံအောင် ပြောင်းလို့ရတယ်။ Android နဲ့ iOS က အရင်လောက် app eco system က မကွာဟတော့ဘူးဆိုတာကို သတိထားမိတယ်။ iOS မှာ ရှိရင် Android မှာလဲ ရှိနေပြီ ဆိုတာကို တွေ့လာရတယ်။ သို့ပေမယ့် သုံးနေသည့် Ulysses, Agenda လိုမျိုး iCloud နဲ့ Sync လုပ်ထားတာတွေကတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့။
အဓိကပြဿနာက iCloud ပဲ။ iAWriter ဆိုလည်း ဖတ်ချင်ရင်တောင် အဆင်မပြေဘူး။ အကုန်လုံးက iCloud မှာပဲ သိမ်းထားတယ်။ Twitter default app က သုံးရတာ Tweetbot လောက်မကောင်းဘူး။ iCloud ကြောင့် အချို့ App တွေကို ဖုန်းပေါ်ကနေ သုံးဖို့ကို မေ့လိုက်တယ်။ Note9နှင့် အတူ One Drive 100 GB free ရတော့ One Drive ပါ သုံးဖြစ်သွားတယ်။ ဝယ်ထားသည့် Google Drive က လုံးဝကို အဆင်မပြေတာ။ One Drive ကလည်း ထင်သလို ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Google Drive ထက်စာရင်တော့ အများကြီး အဆင်ပြေတယ် လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
အခုလမှာ One UI update ရတယ်။ မိုက်တယ်။ Screen အကြီးတွေအတွက် သေချာလုပ်ထားတယ်။ ခက်တာက Samsung မှာ ပါသည့် App အတွက်ပဲ ဖြစ်နေတော့ အများကြီး မထူးသွားဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ Big Screen တွေ အတွက် အရင်က Apple Developer Conference မှာ ပြောထားသည့် အချက်တော်တော်များများ ကို လိုက်နာထားတယ်။ Tab ကို အောက်မှာ သုံးထားတာ။ Font Side တွေကြီးထားတာ။ View အတွက် အပေါ်ပိုင်းမှာ နေရာယူထားတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Android က တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက်လာတယ်။ အစပိုင်းက iOS နဲ့ တူပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကွဲထွက်လာတယ်။ security ပိုင်းမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း တင်းကျပ်လာတယ်။ Android9မှာဆိုရင် permission တွေ စပြီးပေးရတာ https မှ အလုပ်လုပ်တာ စတာတွေ ပါဝင်လာပါပြီ။ Windows , Linux သုံးနေသည့် သူတွေ အတွက်ကတော့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ Mac သုံးနေသည့် သူတွေ အတွက် iPhone လိုမျိုး အဆင်မပြေဘူး။ iPhone , iPad , Mac စသည့် devices တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု sync ဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ Copy, Paste အတွက် clipboard လိုမျိုးပေါ့။
နောက်ပိုင်းမှာ Android က camera တွေကောင်းလာတယ် ဆိုတာကို လက်ခံရမှာပဲ။ တော်တော်လေးကို ကောင်းလာတယ်။ Note9camera က တော်တော်လေးကို ကောင်းတယ် လို့ဆိုနိုင်တယ်။ Note9ရဲ့ Super AMOLED က စိုပြီးလင်းထွက်နေတော့ iPhone ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်း မှောင်နေသလိုပဲ။ LCD နဲ့ Super AMOLED က အတော်ကွာမှန်း သုံးကြည့်မှ သိတယ်။ iPhone X Max မှာတော့ display က တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း မတန်မဆပါပဲ။
တောက်လျှောက် Android သုံးနေပေမယ့် နောက်ပိုင်း iPhone အသစ်ထွက်ပြီး ဈေးနှုန်း အဆင်ပြေခဲ့ရင် ပြန်ပြောင်းသုံးဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ iCloud, Ecosystem တွေကြောင့် Android က ကောင်းပေမယ့် အဆင်မပြေသေးဘူး။
Categorized as nothing Tagged Android, note9
ကိုစေတန် Mac ကနေ စာရိုက်တင်တာ ထင်တယ်။ သဝေထိုးတွေ နေရာမှားနေတယ်။ ကျနော်လဲ အဲ့လို ဖြစ်နေလို့ အမှန်အတိုင်းမြင်ရအောင် လုပ်လို့ရရင် ပြောပါဦးဗျာ။
what font are you using ? please try with zawgyi 2009. You may using old zawgyi font.
Programming Basic (Python) Draft v1.1